Bit By Bit - Running kuedza - 4.5.2 Zvivakire iwe pachako
Mukuwedzera pakuputira miedzo pamusoro pemamiriro ezvinhu arimo, iwe unogonawo kuvaka zvaunoedza. Kubudirira kukuru kwei nzira iri kutonga; kana urikuvaka kuedza, iwe unogona kugadzira nzvimbo uye marapirwo aunoda. Iyi mamiriro ezvinhu epanguva yekuongorora anogona kuita mikana yekuedza dzidziso dzisingakwanisi kuongorora mumamiriro ezvinhu anowanzoitika. Izvo zvipingamupinyi zvikuru zvekuvaka iwe pachako kuedza ndezvokuti zvinogona kudhura uye kuti zvakatipoteredza iwe unogona kugadzira zvingasava nehutano hwehutsika hunoitika. Vatsvakurudzi vanozvivaka voga vanofanirawo kuva neurongwa hwekuunganidza vatori vechikamu. Apo patinenge tichishanda muhurongwa huripo, vatsvakurudzi vari kunyanya kuunza zvidzidzo kune avo vanotora. Asi, apo vatsvakurudzi vanozvivakira ivo pachavo, vanofanira kuunza vatori vechikamu. Nenzira yakanaka, mabasa akadai seAmazonical Turk (MTurk) anokwanisa kupa vatsvakurudzi nenzira yakanakisisa yekuunza vatori vechikamu kuongororo dzavo.
Mumwe muenzaniso unoratidzira kunaka kwevepoke mamiriro ekuongorora kushandiswa kwezvinyorwa ndeye digiti yemagetsi yekuongorora kwakaitwa naGregory Huber, Seth Hill, uye Gabriel Lenz (2012) . Ichi chiongorori chinotsvaga zvingangodaro zvinokonzerwa nekushanda kwehurumende yekutonga. Pakutanga zvidzidzo zvisiri zvekuongorora zvezvakasarudzwa zvakaratidza kuti vhoti havakwanise kunyatsorongedza kushanda kwevematongerwe enyika vakagadzirira. Kunyanya, vateereri vanoita sevanotambura nevanokonzera zvitatu: (1) vanonyanya kufunga nezvemazuva ano pane kugadzirisa basa; (2) vanogona kushandiswa nekutaura, kuisa, uye kutengesa; uye (3) vanogona kukanganiswa nezviitiko zvisingabatanidzi kushanda zvakanaka, zvakadai sekubudirira kwemauto emitambo emunharaunda uye mamiriro okunze. Mune zvidzidzo zvekare, zvisinei, zvakanga zvakaoma kuparadzanisa chimwe chezvinhu izvi kubva pane zvimwe zvinhu izvo zvinoitika muzvokwadi, sarudzo dzisingasviki. Nokudaro, Huber nevakashanda navo vakasika nzvimbo yakanyatsosarudzwa yekuvhota kuitira kuti vazviparadzanise, vozoongorora zvidzidzo, chimwe nechimwe chezvinhu izvi zvitatu zvinokwanisika.
Sezvo ini ndichirondedzera kuongororwa kwakaitwa pasi apa, zvichanzwika zvikuru, asi yeuka kuti kubudirira hakusi chinangwa muongororo-maitiro. Asi, chinangwa ndechokusiyanisa zvakajeka nzira yaunenge uchiedza kudzidza, uye izvi zvakasununguka zvakanyanyisa dzimwe nguva hazvigoneki mukudzidza nekuwedzera kwezvechokwadi (Falk and Heckman 2009) . Uyezve, mune imwe nyaya iyi, vatsvakurudzi vakatsanangura kuti kana vhoti vasingakwanisi kuongorora zvakajeka kushanda mumamiriro ezvinhu akareruka, saka havazokwanisi kuzviita mune zvakanyatsogadzirwa, zvakaoma kunzwisisa.
Huber nevamwe vaishanda navo vakashandisa MTurk kuunganidza vatori vechikamu. Pane imwe nguva mugoveri akapa ruzivo rwakaziviswa uye akapedza muedzo mutsva, akaudzwa kuti aive achiita mutambo wepasikati 32 kuti awane zviratidzo zvingashandurwa kuva mari chaiye. Pakutanga kwemutambo, mumwe mubatanidzwa akaudzwa kuti akanga atumirwa kuti "allocator" iyo yaizoita kuti awane mahwendefa akasununguka kumativi ose uye kuti vamwe vagova vaive vakapa kupfuura vamwe. Uyezve, mumwe nomumwe mubatanidzwa akaudzwa zvakare kuti aizowana mukana wekuchengetedza wake allocator kana kugoverwa imwe itsva mushure mekutamba kwemutambo wemutambo. Zvapiwa zvaunonyatsoziva nezveHuber uye vavakaroorana navo, zvinogona kuonekwa kuti hurumende inomiririra hurumende uye sarudzo iyi inomiririra sarudzo, asi vatori vechikamu vakanga vasingazivi zvinangwa zvekutsvakurudza. Pamwe chete, Huber nevamwe vashandi vakashanda vanenge vanenge 4 000 vakabhadharwa ne $ 1.25 nokuda kwebasa rakatora anenge maminitsi masere.
Yeuka kuti chimwe chezvakawanikwa kubva kutsvaga tsvakurudzo ndechokuti vhoti vanobhadhara uye vanoranga zvinokonzerwa nemigumisiro yazviri pachena isingagoni kudzora, zvakadai sekubudirira kwemauto emitambo emunharaunda uye mamiriro okunze. Kuti uone kana zvisarudzo zvevatori vechikamu zvingatungamirirwa nezviitiko zvakangoerekana zvangoerekana zvaitika, Huber nevanoshanda navo vakawedzera lotto kumagariro avo. Pakati pepakati pechitanhatu kana kuti yechitanhatu (kureva, mberi kwemukana wekutsvaga mugovera) vatori vechikamu vakaiswa mujotori kune dzimwe nguva apo vamwe vakagamuchira zvuru zvishanu, vamwe vakagamuchira mapeji 0, uye vamwe vakarasikirwa 5,000 points. Iyi lotto yakanga ichifanirwa kutevedzera nyaya dzakanaka kana dzakaipa dzisingabatanidzwi nekushanda kwezvematongerwo enyika. Kunyange zvazvo vatori vechikamu vakatsanangurwa zvakajeka kuti lottery yakanga isingabatanidzwi nekushanda kwevana vavo, migumisiro yetikiti yakaramba ichiita zvisarudzo zvevatori vechikamu. Vatori vechikamu vaibatsirwa nebheroti vainyanya kuchengetedza avo, uye izvi zvakasimbiswa apo lotto yakaitika munharaunda ye16-ikozvino kusati kwasarudzwa-pane zvakaitika panguva yose 8 (Mufananidzo 4.15). Izvi zvinoguma, pamwe chete nedzimwe dzakawanda zvedzidzo mupepa, zvakatungamirira Huber nevamwe vashandi kugumisa kuti kunyange mumamiriro ezvinhu akareruka, vhoti vane dambudziko rokuita sarudzo dzakachenjera, chigumisiro chakakonzera kutsvakurudza mune ramangwana pamusoro pekuita sarudzo (Healy and Malhotra 2013) . Kuedzwa kwaHuber nevamwe vanoratidzira kunoratidza kuti MTurk inogona kushandiswa kuunganidza vatori vechikwata zvekuongorora-maitiro ekuraira kuitira kuti vaongorore zvakananga dzidziso. Inoratidzawo kukosha kwekuvaka nzvimbo yako yekuenzanisa: zvakaoma kufungidzira kuti izvi zvakafanana sei zvingadai zvakave zvakasarudzwa zvakachena pane imwe mamiriro ezvinhu.
Mufananidzo 4.15: Zviwanikwa kubva kuna Huber, Hill, and Lenz (2012) . Vatori vechikamu avo vakabatsirwa kubva kuLotter vakange vachida kuchengetedza avo, uye izvi zvakasimbiswa apo lotto yakaitika munharaunda ye16-ikozvino kusati kwasarudzwa kusarudzo-kupfuura apo yakaitika kumativi ose 8. Yakatorwa kubva Huber, Hill, and Lenz (2012) , chidzidzo 5.
Mukuwedzera pakuvaka ma-labor-like experiments, vatsvakurudzi vanogonawo kuvaka zvidzidzo zvinowanikwa mumunda. Semuenzaniso, Centola (2010) akavaka dhigirii Centola (2010) yekudzidza zvakakonzerwa nehutano hwemasangano ekupararira kwetsika. Mubvunzo wake wekutsvakurudza wakamuda kuti aone mufambiro wakafanana wakapararira kune vanhu vainge vane nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekugara kwevanhu asi pane imwe nzvimbo isingazivikanwi. Nzira chete yekuita izvi yaiva nebhapoke, kuedza-tsika yakagadzirwa. Muchiitiko ichi, Centola akavaka hutano hwehutano hwewebhu.
Centola akaunganidza vatora 1 500 kuburikidza nekushambadzira pawebsite yehutano. Apo vateveri vaisvika panzvimbo yeIndaneti-iyo yaidanwa kuti Healthy Lifestyle Network-vakapa mvumo yakagadziriswa uye vakabva vagoverwa "shamwari dzehutano hwehutano." Nemhaka yekuti nzira iyo Centola akapa avo vehukama hwehutano, akakwanisa kubatana pamwe zvakasiyana-siyana maitiro evanhu mapoka akasiyana. Mamwe mapoka akavakwa kuti ave nemashandisirwo emagetsi (apo munhu wose aikwanisa kunge akabatanidzwa), nepo mamwe mapoka akavakwa kuti ave nemagetsi akabatanidzwa (uko kuwirirana kunowanikwa munzvimbo yakaoma). Zvadaro, Centola akaunza unhu hutsva mumutambo mumwe nomumwe: mukana wekunyora kune webhusaiti itsva nehuwandu hwehutano hwehutano. Pese apo chero munhu upi zvake akasaina mukana webhusaiti iyi itsva, vose vehutano hwehutano vakagamuchira email vachizivisa izvi. Centola akawana kuti chiito ichi-kusainira webhusaiti itsva-kupararira mberi nekuchimbidzika mumataiti akabatanidzwa kupfuura mumatarenda asina maitiro, kuwanikwa kunopesana nedzimwe pfungwa dziripo.
Kakawanda, kuvaka chido chako pachako kunokupa zvakawanda zvekutonga; zvinoita kuti iwe ugadzire nzvimbo yakanakisisa inogona kuisa pane zvaunoda kudzidza. Zvakaoma kufungidzira kuti zvidzidzo zviviri zvandakangotsanangura zvingadai zvakaitwa sei mune imwe nzvimbo yakagara iripo. Uyezve, kuvaka imwe purogiramu yako kunoderedza kushushikana kwehutsika pamusoro pekuedza mune zvese zviripo. Apo iwe unovaka iwe pachako kuedza, zvakadaro, iwe unomhanya mune dzakawanda zvezvinetso zvinosangana nazvo muongororo yekuongorora: kuunganidza vatori vechikamu uye kunetseka pamusoro pezvechokwadi. Chikonzero chekupedzisira ndechokuti kuvaka iwe pachako kuedza kunogona kudhura uye kunopedza nguva, kunyange, semuenzaniso uyu unoratidzira, kuedza kunogona kubva kune dzimwe nzvimbo dzisina kuoma (dzakadai sekudzidza kwekuvhota Huber, Hill, and Lenz (2012) ) kunzvimbo dzakakomba (zvakadai sokudzidza mitambo uye kuparadzirwa Centola (2010) ).